Iindaba- "Ukukhanya kweBrand & Yantai Power" Star Enterprise Brand
Ukubaluleka kokuqondwa kobuso kunye nomlinganiselo wobushushu kumsebenzi wothintelo kunye nolawulo lwe-COVID-19
"UkuKhanya kweBrand & Yantai Power" Star Enterprise Brand
Ukukhawulezisa ukuthengiswa kwe-5G ukwenza i-5G + ubomi obuhlakaniphile
Phumelela ngo-2021 "Impilo kwaye Uyonwabele eYantai" inkwenkwezi yeshishini brand
Ngomhla we-19 kaJuni, "Ukukhanya kwe-brand kunye namandla e-Yantai" ngo-2021 ukwakhiwa kwesakhiwo se-Yantai brand yabanjwa kwi-Yantai Broadcasting kunye ne-TELEVISION Station.
I-Shandong Well Data Co., Ltd. inikezelwa ngo-2021 "Impilo kwaye Uyonwabele eYantai" uphawu lweshishini lenkwenkwezi.
Umxholo ugxile kwinkqubo enkulu yokwakha uluntu olunenkqubela ngokuphakathi ngendlela ejikelezayo, inkqubo yophuhliso kunye nempumelelo eqaqambileyo yamashishini kwisixeko sethu ukusebenza nzima kunye nokwakha iimpawu, ukuvakalisa inkxaso eyomeleleyo yeempawu ezahlukeneyo kuzo zonke- uluntu olunenkqubela.
I-Shandong Well Data Co., Ltd., imveliso yehardware yokuchonga ekrelekrele ukusukela ngo-1997, ixhasa i-ODM, i-OEM kunye nokulungelelanisa ngokweemfuno zabathengi.Sizinikele kubuchwephesha bokuchongwa kwesazisi, esifana nebhayometriki, umnwe, ikhadi, ubuso, sidityaniswe netekhnoloji engenazingcingo kunye nophando, imveliso, ukuthengiswa kweetheminali ezikrelekrele zokuchonga ezifana nokuhamba ixesha, ulawulo lofikelelo, ukubonwa kobuso kunye nobushushu be-COVID-19 njl.njl. ..
Sinokubonelela nge-SDK kunye ne-API, kunye ne-SDK elungiselelwe ukuxhasa uyilo lomthengi lweetheminali.Sithemba ngokunyanisekileyo ukusebenza nabo bonke abasebenzisi, abahlanganisi benkqubo, abaphuhlisi besoftware kunye nabasasazi behlabathi ukuze baqonde intsebenziswano yokuphumelela kunye nokudala ikamva elimangalisayo.
Umhla wesiseko: 1997
Ixesha loluhlu: i-2015 (ikhowudi ye-stock yeBhodi yesiThathu eNtsha 833552)
Isiqinisekiso seshishini:Ishishini leSizwe lobuchwepheshe obuphezulu, ishishini lesiqinisekiso sesoftware ephindwe kabini, ishishini lohlobo oludumileyo, ishishini leShandong Ibhadi, ishishini lesoftware eligqwesileyo leShandong, ishishini elitsha eliphakathi leShandong lobuchwephesha, iZiko lobuchwephesha beshishini leShandong, ishishini lentshatsheli elingabonakaliyo leShandong.
Ubungakanani beshishini:inkampani inabasebenzi abangaphezu kwe-150, iinjineli ezingama-80 ze-R&D, iingcali ezingaphezu kwama-30.
Izakhono ezingundoqo:uphuhliso lwehardware, i-OEM ODM kunye nokwenziwa, uphando lwethekhnoloji yesoftware kunye nophuhliso, uphuhliso lwemveliso yobuqu kunye nobuchule benkonzo.